equalityMM – ညီမျှခြင်းမြန်မာ
Author Archive for: equalityMM
You are here: Home / Homepage / equalityMM
Meanwhile lets just say that we are proud equalityMM contributedawhooping 367 entries.
Entries by equalityMM
March 5, 2020 in HR သတင်း /by equalityMM
By ထွန်းထွန်း5March 2020Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. ကရင်ပြည်နယ်၊ မြဝတီမြို့နယ်တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည့် Frontier Myanmar သတင်းဌာန၏ သတင်းထောက် မနော်ဘက် တီဟန်အား ပြန်လွှတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း နယ်ခြားစောင့် တပ်ဖွဲ့(BGF)မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး စောချစ် သူက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ နော်ဘက်တီဟန်သည် မြဝတီမြို့ အမှတ် ၁ နယ်စပ် ဂိတ်တွင်း သတင်းရယူနေစဉ် BGF တပ်ဖွဲ့၏ ဖမ်းဆီးခံရခြင်း ဖြစ်ပြီး မတ်လ ၄ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းကတည်းက ဌာနနှင့် အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း Frontier Myanmar က ယနေ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်မှူးကြီး […]
လူ့အခွင့်အရေးစကားသံ အပိုင်း(၁၅၀) လွတ်လပ်၊ မျှတ၊ သန့်ရှင်းသော ရွေးကောက်ပွဲ
September 20, 2019 in HR ပညာပေးရုပ်သံ, မာတီမီဒီယာ /by equalityMM
September 9, 2019 in HR သတင်း /by equalityMM
September 9, 2019မြန်မာနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေကြား ပိတ်မိနေတဲ့ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့နဲ့ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကို သွားရောက်ကူညီတဲ့ လူသားချင်းစာနာမှု အဖွဲ့တွေကို တားဆီးပစ်ခတ်တာမျိုး မလုပ်ဖို့ နယူးယောက်အခြေစိုက် HRW လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်အဖွဲ့က တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က တင်ပြထားပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်ကစလို့ စက်တာဘာလဆန်းအထိ ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ တရုတ်နယ်စပ်အခြေစိုက် ညီနောင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ ၃ ခု (TNLA/ AA/ MNDAA) တို့ကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ တိုင်ရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်တွေက မြန်မာစစ်တပ် အခြေစိုက်စခန်းတွေနဲ့ ကုန်သွယ်ရေးတံတားကို ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက် ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီး မြန်မာစစ်တပ်ဘက်က လုံခြုံရေးတပ်သား ၁၀ ဦးလောက် […]
September 6, 2019 in HR သတင်း /by equalityMM
September 6, 2019 ကလေးစစ်သားဘဝ အတွေ့အကြုံများကို မီဒီယာအား ဖြေကြားခဲ့ခြင်းသည် တပ်မတော်၏ဂုဏ်သိက္ခာကို ညှိုးနွမ်းစေသည်ဟုဆိုကာ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) ဖြင့် ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ် ချမှတ်ခံထားရသူ ကိုအောင်ကိုထွေးသည် ယနေ့ မနက် ၈ နာရီ တွင် လွတ်ရက်စေ့၍ အင်းစိန်ထောင်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသည်။ ゞင်းသည် ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) အမှုအတွက် ရင်ဆိုင်နေဆဲမှာပင် တရားသူကြီးအား “နွား” ဟု ခေါ်သည့်အမှု အတွက် ထောင်ခြောက်လ ချခံခဲ့ရသေးသူဖြစ်သည်။ စတင်ဖမ်းဆီးခံရချိန်မှ ပြန်လွတ်လာချိန်အထိ ထောင်ထဲတွင် နှစ်နှစ် နေခဲ့ရသည်။ ထောင်ဘူးဝမှထွက်ထွက်ချင်းတွင် ၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အ‌ခြေခံဥပဒေ ဖျက်သိမ်းရန် အမှန်တကယ် လိုအပ်နေကြောင်း အသက် ၂၈ နှစ်အရွယ် ゞင်းက ပြောသည်။ […]
September 5, 2019 in သတင်း /by equalityMM
Equality Myanmar September 5, 2019 လူ့အခွင့်အရေးအသိမြင်ဖွင့်သင်တန်း (၆) ရက်တာဆွေးနွေး မှုအစီ အစဉ်ကို ကချင်ပြည်နယ်၊ ဗန်းမော်မြို့၊(ထွယ်ဆန်ဘုရားကျောင်း)တွင် ညီမျှခြင်းမြန်မာ(Equality Myanmar) နှင့် လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေး သူများကွန်ယက်(HREN) တို့မှပူးပေါင်း၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂၆ မှ ၃၁ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသို့ ဗန်းမော်မြို့၊ ဝိုင်းမော်မြို့၊ အင်းတော်ကြီးဒေသမှ သင်တန်းသားစုစုပေါင်း (၂၇) ကျော် စိတ်ပါ ဝင်စားစွာ တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။ သငတွနွးသို့ လူ့အခှငွ့အရေးပညပေးသူမှား ကှနယွကမွှ ဆရာမ မမှငွ့မှငွ့ခှိုမှ ပူးပေါငွး၍ ဦးဆောငဆွှေးနှေးခဲ့ကှသညွ။သငတွနွးကာလအတှငွး လူ့အခှငွ့အရေးအဓိပပြါယနွှငွ့အယူအဆ၊ လူ့အခှငွ့အရေး ပေါပွေါကလွာပုံ သမိုငွး ကှောငွး၊ လူ့အခှငွ့အရေး အပိုဒွ မှား၊ ဖှဲ့စညွးပုံအခှခေံဥပဒအခနွေး(၈)၊လူ့အခှငွ့အရေး […]
September 2, 2019 in သတင်း /by equalityMM
Equality MyanmarSeptember 2, 2019 စက်တင်ဘာလ၊ ၁ရက်နေ့တွင် Mon Youth Progressive Organization (MYPO), Human Rights Educator’s Network (HREN), Equality Myanmar and Burmese People in Ireland မွန်လူငယ်ပညာပေးအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး ရေးမြို့ရှိ ရေဘေးသင့်ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများအတွက် သွားရောက် လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ရေဘေးသင့် အထက ၂၊ မူလွန် ၅ အောင်မင်္ဂလာ၊ ရေးမြို့၊ မူလွန် ၉ အောင်သုခ၊ ရေးမြို့နှင့် အမက ၂ ချောင်းတောင်ရှိ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား အယောက် ၉၇၀ ခန့်အတွက် ထီး၊ ကျောပိုးအိတ်၊ ပန်းချီးဆွဲစာအုပ်၊ ရောင်စုံခဲတံ၊ သွားတိုက်တံနှင့် သွားတိုက်ဆေးများ […]
August 25, 2019 in သတင်း /by equalityMM
Equality MyanmarAugust 25, 2019 ကလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒီအကြောင်းအရာကို တခါမက ရေးဘူးပါတယ်… ဒါပေမဲ့ အခုတခါ ထပ်ရေးဖို့ စိတ်ကူးမိပြန်ပါပြီ… ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်က ပြည်သူတွေဟာ စေတနာသဒ္ဒါတရားထက်သန်ကြပါတယ်.. ဒုက္ခရောက်သူတွေကို ကူညီချင်တဲ့စိတ်၊ အလှူအတန်းလုပ်ပြီး ကုသိုလ်ပြုလိုတဲ့စိတ်က မြင့်မားသလို ထင်ရှားကြပါတယ်.. ရေဘေးမီးဘေးသဘာဝဘေး စစ်ဘေးတွေမှာ ပရဟိတစိတ်တွေနဲ့ သွားရောက်ကူညီကြတာကို ပီတိဖြစ်စရာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်… အဲလိုပုံတွေထဲမှာမှ ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံလေးတွေ တက်လာတာကို တွေ့ရပါတယ်… အလှုရှင်တွေက မိမိပြုလုပ်တဲ့အလူကို အခြားသူတွေ ကြည်နူးသာဓုခေါ်စေချင်ဇောနဲ့ တင်တဲ့ပုံတွေမှာ ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိထားစရာပုံလေးတွေကို ဂရုပြုမိပါတယ်.. ကလေးငယ်တွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲလူသားတွေဘဲဖြစ်ပါတယ်.. အသက်အရွယ်နဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ နုနယ်ကောင်းနုနယ်နိုင်ပေမဲ့ သူတို့မှာ ခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားတွေရှိတတ်ပါတယ်.. လူကြီးတွေလိုဘဲ ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစားခံချင်ကြပါတယ်.. သူတို့မှာ အနာဂတ်တွေရှိကြတယ်.. အိပ်မက်တွေရှိကြတယ်..လက်ရှိအခြအနေမှာ ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးဘဲဖြစ်နေဖြစ်နေ သူတို့ရဲ့ […]
August 24, 2019 in သတင်း /by equalityMM
Equality MyanmarAugust 24, 2019 Tharthimyae ၏ ထောက်ပံ့မှုဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ အမျိုးသမီးကော်မတီ (ပဲခူးတိုင်းအရှေ့ခြမ်း) နှင့် ညီမျှခြင်းမြန်မာ တို့ ပူးပေါင်း၍ (၅) ရက်တာ “ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေး အမြင်ဖွင့် သင်တန်း” ကို (၁၁.၈. ၂၀၁၉) မှ (၁၅.၈.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ အောင်မင်္ဂလာခန်းမ၊ တောင်ငူမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် အောင်မြင်စွာကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ခြမ်း (၁၄)မြို့နယ်မှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၊ အမျိုးသမီးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် (၃၃)ဦး တက်ရောက်ဆွေးနွေးကြပါ သည်။ “ ဒီသင်တန်းတက်လိုက်ရလို့ လူ့အခွင့်အရေးဗဟုသုတတွေ၊ ခံစားခွင့်တွေ၊ ဥပဒေတွေကို လေ့လာ လိုက်ရတယ်။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်း မျှဝေပေးနိုင်မယ်။ အမျိုးသမီးနဲ့ ကလေး သူငယ်တွေ တန်းတူအခွင့်အရေးရဖို့ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ […]
August 23, 2019 in သတင်း /by equalityMM
Equality Myanmar August 23, 2019 လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့်ဆိုင်ရာသင်တန်းကို ညီမျှခြင်းမြန်မာအဖွဲ့အစည်းမှဦးဆောင်၍ချင်းပြည်နယ်၊ ကန်ပတ်လက်မြို့တွင် သြဂုတ်လ ၁၂ရက်၊ မှ ၁၅ ရက်နေ့ထိ ၄ ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းသို့ ကန်ပတ်လက် မြို့မှ စိတ်ပါဝင်စားသည့် သင်တန်းသား သင်တန်းသူ စုစုပေါင်း ၂၁ ယောက် တက် ရောက် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ (၄) ရက်တာသင်တန်းကာလအတွင်းတွင် လူ့အခွင့်အရေးအယူအဆနှင့် အဓိပ္ပာယ်၊ လူ့အခွင့် အရေး ပေါ်ပေါက် လာပုံသမိုင်းကြောင်း နှင့် လူ့အခွင့်အရေးကြေညာ စာတမ်းအပိုဒ်များ၊ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်၊ ယုံကြည်ခွင့် အဓိပ္ပာယ်နှင့် စံသတ်မှတ်ချက် (၈) ချက်၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်၊ ယုံကြည်ခွင့်ချိုး ဖောက်ခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်၊ ယုံကြည်ခွင့်၏ အစိုးရတာဝန်များ၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်၊ […]
လူ့အခွင့်အရေးစကားသံ အပိုင်း(၁၄၈) နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသူများကို အားပေးကူညီရေးနေ့
August 21, 2019 in HR ပညာပေးရုပ်သံ, မာတီမီဒီယာ /by equalityMM
ဤရုပ်သံကိုထုတ်လွှင့်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်သူများ နှိပ်စက် ညှင်းပန်းခံရသူများကို အားပေးကူညီရေးနေ့ အကြောင်းသိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။